News Collection: सुरक्षित इन्टरनेटबारे ७ भ्रम
सुरक्षित इन्टरनेटबारे ७ भ्रम
तपाँईको कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस अपडेट गर्नुभएको छ, र यसबाट अश्लिल 'पोर्नो' साइटहरु (जुन तपाँईलाई भाइरस भएको जस्तो लाग्छ) खुल्दैनन् पनि। यति भएपछि तपाँईको अनलाई सुरक्षित भएको लाग्छ ? सुरक्षित नहुनसक्छ !
माथिका कुराले तपाँईलाई साइबर अपराधबारे सचेत गराउन सघाउँछ। कसैले पनि १०० प्रतिशत सुरक्षा दिन सक्दैन। इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता जसरी बढेका छन् इन्टरनेट ब्राउजिङ पनि उत्तिकै असुरक्षित बन्दैछ।
सुरक्षित ब्राउजिङबारे सोफोजले जारी गरेको रिपोर्टले यसको प्रयोगका भ्रमबारे जानकारी गराएको छ। यसबाट तपाँईले सुरक्षित ठानेको कुरा पनि असुरक्षित छ भन्ने देखाउँछ।
मलवेयरको आक्रमणबाट सुरक्षित छु भन्ने ठान्नुहुन्छ भने- सोफोजको रिपोर्ट अनुसार धेरैजसो इन्टरनेट प्रयोगकर्ता मलवेयरको निरन्तर सिकार भइरहँदा पनि अन्जान रहिरहन्छन्। मलवेयर आक्रणम विशेषगरि व्यक्तिगत सूचना र पासवर्ड या तपाँईको इमेलबाट अरुलाई स्पाम पठाउन प्रयोग भइरहेको हुन्छ। तपाँईको इमेलमा चिनेका मान्छेका नामबाट भियाग्रा या यस्तै असान्दर्भिक इमेलहरु आइरहेको हुन्छ। तर यसमा पठाउनेलाई थाहै हुन्न।
यदी तपाँई पोर्नो या खेलका साइटहरुबाट ह्याकरहरु प्रवेश गर्छन भन्ने सोच्नुहुन्छ भने त्यो अझ डरलाग्दो हो। रिपोर्टका अनुसार तपाँईको इन्टरनेटबाट छिर्ने घातक कुराहरु तपाँईले सधैजसो चलाउने इन्टरनेट साइटबाट पसिरहेको हुनसक्छन्। रिपोर्टका अनुसार ८३ प्रतिशत विश्वास गरिएका साइटबाट यस्ता खराव कुराहरु छिर्ने गर्छन्।
साइबर आक्रमणबाट बच्न कुनै एकमात्र 'फर्मुला' छैन। कतिपय अवस्थामा प्रयोगकर्ताको सहभागिताविना नै तपाईको कम्प्युटरमा आक्रमण हुनसक्छ। रिपोर्टका अनुसार कम्प्युटरको जतिसुकै कतिपय मलवेयर वेव ब्राउज गर्नासाथ डाउनलोड हुनसक्छ जसलाई जतिसुकै जान्ने इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले समेत रोक्न सक्दैन।
डाउनलोड गर्दामात्र 'साइबर थ्रेट' हुन्छ भन्ने लाग्छ भने तथ्य केलाउनुस्। रिपोर्टका अनुसार ह्याकरहरुले वेवपेज कन्टेन्टमा नै खतरनाक कोड राख्छन्। र सामान्य कुरा डाउनलोड गर्दा यो आफै डाउनलोड हुन थाल्छ। मलवेयर एक किसिमको दुरुपयोग गर्ने प्रविधि हो जुन ह्याकहरुलाई बेचिन्छ। र त्यसैले कम्प्युटर खराब पार्नेमात्र होइन थप मलवेयर डाउनलोड गर्न समेत सघाउँछ।
भ्रम नं ५
ह्याकरको जालोबाट बच्न सकिने पूर्ण सुरक्षित ब्राउजर अहिलेसम्म बनेको छैन। जाभास्क्रिप्ट सबैमा चल्ने भएकाले हामीले चालाउने सबै ब्राउजर असुरक्षित छन्। यतिसम्म कि एडोब एक्रोवेट रिडर राखेपछि पनि ह्याकरको जालोमा फस्न सकिन्छ।
भ्रम नं ६
जब ब्राउजरमा लक आइकन देखिन्छ, हामीलाई लाग्छ हामी सुरक्षित अवस्थामा छौं। रिपोर्टका अनुसार यसले मलवेयरबाट सुरक्षित राखेको भने हुँदैन। अधिकांश वेव सेक्युरिटीका उत्पादनहरु मलवेयरलाई फिल्टर गर्न असमर्थ छन्।
भ्रम नं ७
राम्रो वेव सुरक्षा दिनेले जुनसुकै साइट पनि निर्धक्क खोल्नसक्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। सुरक्षाको विषयमा यसको एडमिनिस्ट्रेसनमा पूरा गर्ने प्रावधानले महत्व राख्छ। एडमिनिस्ट्रेसन कति सहज छ त्यो महत्वपूर्ण हो। यसमा कति स्टेप पालन गर्नुपर्छ ? यसमा राख्‍नुपर्ने कति डकुमेन्ट मागिएको छ ? यी सबै आधारमामात्र वेव सुरक्षाबारे जानकारी पाउनसक्छ।